၎င်းသည် Archos Diamond Plus | Androidsis
ဒါက Archos Diamond Plus ပါ
Alexis Martinez | | IFA
IFA 2015 ၏ ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီး နှစ်တစ်နှစ်၏ နောက်ဆုံးအကြိမ် နည်းပညာပြပွဲကြီး၏ ပထမဆုံးနေ့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးဆောင်ခဲ့သည့် လှုပ်ရှားမှုများစွာကို ဘလော့ဂ်တွင် မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မနေ့က စက်ရှင်အတွင်း၊ ဘလော့ဂ်သတင်းကို အပ်ဒိတ်လုပ်နေစဉ် ယနေ့တစ်လျှောက်လုံး မြင်တွေ့ရမည့် စက်ပစ္စည်းအများအပြားကို တင်ဆက်ခဲ့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၊ ထုတ်လုပ်သူ ARCHOS သည် ၎င်း၏ကြယ်ပွင့်စက်များထဲမှ တစ်ခုကို တင်ပြရန် တရားမျှတမှုကို အခွင့်ကောင်းယူထားသည်။ Archos Diamond Plusထုတ်လုပ်သူ၏ကိုယ်ပိုင် Diamond မိသားစုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ဒီ terminal က ဘာအကြောင်း နည်းနည်းလေး ပိုနက်နက်နဲနဲ ကြည့်ရအောင်။
Sony၊ Samsung၊ LG၊ Huawei နှင့် ရှည်လျားသော စသည်ဖြင့် လူသိများသော ထုတ်လုပ်သူများ၏ Androidsis တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပြောဆိုလိုသော်လည်း ARCHOS ကဲ့သို့သော လူသိနည်းသော ထုတ်လုပ်သူများအကြောင်းလည်း ပြောရန် နေရာရှိသည်။ ပြင်သစ်အခြေစိုက် ဤထုတ်လုပ်သူသည် ဘာလင်တွင်ကျင်းပသည့် IFA ပထမနေ့တွင် ၎င်း၏စမတ်ဖုန်းသည် ယနေ့အထိ အရေးကြီးဆုံး အလယ်အလတ်တန်းစား/အဆင့်မြင့် Phablet မုဒ်တွင် အဘယ်အရာဖြစ်လာမည်နည်း။
ဤ phablet ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍၊ terminal သည် IPS panel တစ်ခုပါသောစခရင်ကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည် ၉'၇ လက်မ Resolution 1920 x 1080 pixels အောက်တွင်။ အထဲမှာ တစ်ခုတွေ့တယ်။ ရှစ် core ကိုပရိုဆက်ဆာ MediaTek မှထုတ်လုပ်သည်။ MT6753ပြီးတော့ ဒီ SoC နဲ့ တွဲပြီးတော့ သူတို့ ဘယ်လို တွဲလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့ မြင်ပါတယ်။2GB RAM မှတ်ဉာဏ်.
သင်၏အတွင်းသိုလှောင်မှုဖြစ်လိမ့်မည် 16 GB ကိုmicroSD ကတ်အပေါက်ကြောင့် မမ်မိုရီကို ချဲ့ထွင်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသော်လည်း၊ ၎င်း၏ဓာတ်ပုံကဏ္ဍတွင်၊ စက်၏နောက်ဘက်တွင်ရှိသော ၎င်း၏ပင်မကင်မရာကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ၁၃ Megapixels၊ ရှေ့ကင်မရာက 8MP ရှိပါမယ်။ အရေးကြီးသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ ဆက်လက်၍ Diamond Plus သည် မည်သို့လုပ်ဆောင်လာမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရသည်။ 2850 mAh ဘက်ထရီDual-SIM ကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ 4G/LTE ကွန်ရက်များအတွက် ပံ့ပိုးမှုပါရှိပြီး ယနေ့အထိ နောက်ဆုံးထွက် Android အပ်ဒိတ်ဖြစ်သည့် Android 5.1 Lollipop ပါရှိသည်။
ARCHOS သည် Diamond Plus ကို နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ 289,99 ယူရို၏စျေးနှုန်း။ ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်နိုင်ငံများတွင် ဤ terminal ကိုပထမဆုံးခံစားခွင့်ရှိမည်ကို မကြေညာထားသောကြောင့် သံသယများကိုရှင်းရန် ကုမ္ပဏီထံမှအတည်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် IFA အစီအစဉ်ကို ဘာလင်တွင် ရောက်နေသည်၊ ထို့ကြောင့် မကြာမီတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube ချန်နယ်တွင် ဤပြင်သစ်စက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ပထမဆုံးလက်တွေ့ အတွေ့အကြုံများကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်တို့အား၊ ဒီ ARCHOS terminal အသစ်ကို သင် ဘယ်လိုထင်လဲ။ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » IFA » ဒါက Archos Diamond Plus ပါ
Acer Predator 8 GT-810 သည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်တက်ဘလက်အသစ်ကိုပြသခဲ့သည်